Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kormeer ku tagay xarunta weyn ee BJFS – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kormeer ku tagay xarunta weyn ee BJFS
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeeray xarunta rasmiga ah ee golaha shacabka taasoo dhowaan dib u dhiskeedu uu si rasmi ah u bilaaban doono.
Guddoomiyaha ayaa kormeer ku sameeyay dhamaan qeybaha xaruntan ay ka koobantahay sida hoolka uu goluhu ku shiro,qeybta sare ee dhismaha iyo xafiisyada klaa duwan ee xarunta oo dhowr xafiis ah oo ka mid ah hada lagu shaqeeyo.
U jeedka kormeerka ee Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu maanta ku tagay xarunta Golaha shacabka ayaa ah in si deg deg ah loo bilaabo dib u dhiska xaruntan oo muhiim u ah howlaha kala duwan ee Golaha Shacabka.
Dowladda Turkiga oo horrey u balan qaaday dib u dhiska xaruntan ayaa dhowaan sheegtay in ay fulineyso balanqaadkeedii hore islamarkaana ay dhowaan si rasmi ah u bilaabi doonto dib u dhiska xaruntan,Waxaana waxyaabaha dib dhiska xarunta lagu soo kordhin doono, waxaa ka mid ah machad lagu baran doono shuruucda kala duwan ee Baarlamaanka.
Golaha Shacabka ayaa hadda ku howl gala xarunta Guddoonka iyo Guddiyada ee Villa Hargeysa waana halka ay ka dhacaan kulamada guud ee Golaha iyo kan guddiga joogtada ee Golaha Shacabka.
Deeq raashin ah oo laga qeybshay Gobalka Banaadir “SAWIRRO”